Iveki yesi-7, i-Bug Simahla, kunye nokuKhutshwa kweSoftware okuPhumeleleyo | Martech Zone
Iveki yesi-7, i-Bug Simahla, kunye nokuKhutshwa kweSoftware okuPhumeleleyo
NgoLwesibini, Oktobha 9, 2007 NgoLwesine, uJuni 11, 2009 Douglas Karr
Le yiveki yesi-7 emsebenzini wam omtsha kwaye ibiyiveki entle kakhulu ukubhiyozela. Eyethu Uku-odola kwi-Intanethi iyazahlula kwisihlwele sokhuphiswano phaya kwaye siyenze ngokukhawuleza. Kule veki izayo siza eTampa ukuya kuthetha nenye ivenkile yokutyela, enye yezona zikhulu kweli lizwe.
Yintoni etsala aba bathengi ilula. Sifumana iodolo kwivenkile yokutyela. Yiyo yonke le nto imalunga, akunjalo? Xa u-odola kwi-Intanethi, ulindele ukufumana imveliso-ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Olunye ukhuphiswano luzibandakanye neziphelo eziphambili ezingaphambli kunye nokudityaniswa okungabalulekanga. Nangona babekhangeleka behle, abayifumani iodolo yokutyela. Ukuba awunakho ukubonelela ngoku-odolwa ngokuchanekileyo, ngexesha elifanelekileyo, kwaye uqiniseke ukuba yenzile… ke kuya kufuneka uphume ngaphandle kweshishini.
Kukho ezinye iinkampani 'zokubhabha-ngobusuku' ezakhele isisombululo segaraji apha naphaya, kwaye zikhona ezinye iinkampani phaya ezinemibono emihle kodwa azinakho ukuzizisa kuba ziswele italente okanye ubunkokeli. Ndijoyine inkampani eneyona nto ibalaseleyo. Sinetalente efikelela kude kumzi-mveliso, abakhi abayiliweyo kunye nabaphuhlisi, kwaye uninzi lwentando yokuyidibanisa.
Ukuqala, Indawo yokuphumla Benza izigqibo ezithile zokutyala imali kakhulu kubantu abanetalente, isisombululo esiqinileyo, emva koko baqala ukusebenza kwishishini. Iqala ukubhatala. Uyilo loyilo emva kokudityaniswa kwePoint-of-Sales sisakhelo semiyalezo abathengisi abaninzi ehlabathini abanokuba neqhayiya ngaso. Ekuphela kwento inkampani yethu esilela ngayo yayiyiteknoloji yokuyalela ukugcwala ... kulapho ndangena khona.
Ndicinga ukuba umsebenzi wam ufana nomfana ohambisa iiflegi eNascar. Andiphantse ndibenetalente njengabaqhubi abagijimayo, okanye nabanini, kwaye ayimangalisi njengaleyo iphantsi kwentloko. Kodwa ndigcina iliso lam elugqatsweni, ndiphakamisa iflegi etyheli xa sinengxaki, ndiwangawangisa obomvu xa kufuneka simile, kwaye ndiwangawangisa iflegi e-checkered xa sisenza imihla ebekiweyo. Ngumceli mngeni omangalisayo kodwa ndiza kuqhushumba ndingqongwe zezi pros! Kwaye nkwenkwe sihamba ngokukhawuleza!
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo abaphuhlisi bethu bagqibezela kwaye bakhupha indibaniselwano yeZiko lokutsalela umnxeba iZiko lethu leminxeba elibize ngokuba lelona libalaseleyo. Yayiyimveliso yam yoyilo yokuqala nge Indawo yokuphumla, ke ndaziva ngathi sidinga ukubetha ekhaya. Iqela lophuhliso lithathe iimfuno zam kwaye lakha uluhlu lwezincedisi olungaphaya kolindeleyo. Isebenza ngokungenamakhwiniba kwaye iyaqhekeka kolunye usetyenziso oluninzi.
Intlanganiso yokwamkela yayiyeyona nto ihlekisayo endakha ndaya kuyo… kwakungekho mibuzo kwaye yathatha imizuzu eli-10 ubude. Sibonakalisile iapp bayamkela. Yenziwe!
Sikhuphe inkqubo yokuthengisa nge-imeyile yokulinga kumxhasi weSizwe weShishini lokutyela. Ndinikwe izitshixo zokuqhuba imiyalezo kunye noyilo lwe-imeyile. Iziphumo zokuqala lishishini eliphindwe kabini le-B2B amazinga okuphendula.
Siphinde sathatha ukusilela kwethu kweprojekthi namhlanje kwaye sagqiba ukuphelisa ibug yokugqibela eyaziwa kwisicelo. Ngoku sisebenza nzima ekuphuculeni, sisenza izicwangciso zotshintsho lweziseko zophuhliso (ngaphambi kokuba zifuneke) kunye nokuphuhlisa iinguqulelo zesicelo (phambi kokuba zicelwe). Ndizicel 'umngeni ngokwam ukuba ndihlale ndibeke iliso kufutshane nazo zonke izixhobo kwaye ndilawula amaqela amaninzi esele sisebenzele wona, kodwa ibizimanga zeeveki ezisi-7!
Umntu othile undincinile!
tags: ebayLinkedInukukhangela indawo yokuthengamiloukulanda imilosetup ikhonkco
Usuku lweNtshukumo yeBhlog ka-2007 uyeza!
NdineVerizon PPC 6700 endiya kuthanda ukuba ndiyenze le…
Okt 10, 2007 ngexesha 11:54 AM
Ndiyakuvuyela, uDoug. Ukufunda oku kundinike amaqhuma!
Oktobha 10, 2007 ngo-10: 46 PM
Enkosi Julie! Ndisikelelekile ngokufumana umbutho ondiqeshileyo, wandithemba, kwaye wandinika amandla okwenza utshintsho endicinga ukuba luyimfuneko. Ihlala imangalisa into eza kwenziwa ngabasebenzi xa ubavumela!